Indawo esembindini nepholileyo - I-Airbnb
Indawo esembindini nepholileyo
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguB. Alejandra
UB. Alejandra yi-Superhost
Ihlaziywe ngokupheleleyo, ifulethi langoku, elikwiziko lembali, ecaleni kolwandle kunye nemibono yeTeide. Kufuphi neevenkile ezinkulu, iikhefi kunye neendawo zokutyela. Ixhotyiswe umenzi wekofu, iketile, itoaster, isomisi seenwele, intsimbi, iTV kunye neWiFi.
Yindlu ehlaziyiweyo enegumbi lokuhlambela, ikhitshi, ibhedi yesofa kunye negumbi lokulala. Ibhalkhoni enemibono yeTeide kunye nolwandle. Ucango lwebalcony olungenasandi kunye neglasi yeclimalit kunye nesihluzo selanga.
IPuerto de la Cruz sisixeko esiselunxwemeni esinemozulu entle unyaka wonke. Umoya ojikeleze umhlaba wonke kwaye uzolile. Imizuzu embalwa uhamba unokonwabela iinkonzo ezinje ngeelwandle, iLago Martiánez, iivenkile, iivenkile zokutyela kunye neekhefi. I-Loro Parque yimizuzu eyi-15 yokuhamba.
Umbuki zindwendwe ngu- B. Alejandra
Ndiya kufumaneka kuyo nayiphi na imibuzo okanye iingcebiso ozifunayo nangaliphi na ixesha.